साइबर सोमबार २०२१ थर्मोस्ट्याट, रेडिएटरहरूमा ... उत्कृष्ट प्रस्तावहरू
वाइफाइ थर्मोस्टेटहरूमा साइबर सोमबार
ब्ल्याक फ्राइडे सकिए पनि, यदि तपाईंले यी अनौठो साइबर मन्डे डिलहरूको फाइदा उठाउनुभयो भने, स्मार्ट थर्मोस्ट्याट, रेडिएटर, स्टोभ र थप कुराहरूमा सम्झौताहरू प्राप्त गर्ने यो अझै राम्रो अवसर हो। हतार गर्नुहोस्, आज यी मूल्यहरूको साथ अन्तिम दिन हो:
साइबर सोमबार बिक्रीमा Wi-Fi थर्मोस्टेटहरू
Wi-Fi थर्मोस्टेट ब्रान्डहरू जसले साइबर सोमबार आफ्नो मूल्य घटाउँछन्:
यदि तपाईंलाई साइबर सोमबारको समयमा सस्तो वाइफाइ थर्मोस्टेट किन्न आवश्यक छ भने, सबै भन्दा राम्रो ब्राण्ड जसमा छुट हुनेछ:
साइबर सोमबार प्रस्ताव
यो युरोपेली निर्माता स्मार्ट थर्मोस्टेट को सबै भन्दा प्रशंसा ब्रान्ड मध्ये एक भएको छ। यसमा उन्नत यन्त्रहरू छन्, प्रयोग गर्न सजिलो छ, गुणस्तरको छ, र बचत र तापक्रम व्यवस्थापन गर्ने सम्भावनाहरू छन् जुन तपाईंले यी यन्त्रहरू मध्ये एउटाबाट आशा गर्न सक्नुहुन्छ। साइबर सोमबारको समयमा तपाईंले तिनीहरूलाई हास्यास्पद मूल्यहरूमा पनि फेला पार्नुहुनेछ।
यो अन्य युरोपेली निर्माता पनि क्षेत्र मा सबैभन्दा प्रमुख हो। ब्रान्डले उत्कृष्ट गुणस्तर, विश्वसनीयता, र स्मार्ट होम टेक्नोलोजीमा नवीनतम वाइफाइ थर्मोस्टेटहरू प्रदान गर्दछ। ताकि तिनीहरूले ठूलो खर्च समावेश गर्दैनन्, साइबर सोमबारको समयमा तपाईंले तिनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण छुटको साथ कम गर्नुहुनेछ।
न त तपाईंले उत्तर अमेरिकी निर्माताबाट यी अन्य थर्मोस्ट्याटहरू किन्नको मौका गुमाउनु हुँदैन। टेक्नोलोजीको संसारमा सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा प्रसिद्ध फर्महरू मध्ये एक हो र यसले घर स्वचालन र स्मार्ट घरका लागि उपकरणहरूमा पनि ध्यान केन्द्रित गरेको छ। यसको उत्पादनहरूले गुणस्तर, मजबुतता र कार्यक्षमता प्रदान गर्दछ।
Google ले घर उत्पादनहरूको एक लाइन सिर्जना गर्यो जुन स्मार्ट उपकरणहरू जस्तै यसको भर्चुअल सहायक स्पिकरहरू, यसको राउटर स्क्रिनहरू, साथै यसको नेस्ट थर्मोस्टेटहरू मिलेर बनेको छ। तिनीहरू प्रयोग गर्न र स्थापना गर्न धेरै सरल छन्, साथै सस्तो। र धेरै मोडेलहरूले Google सहायकसँग आवाज आदेश नियन्त्रण समर्थन गर्दछ। साइबर सोमबार धेरै कम मा आफ्नो घर को वातानुकूलन को लागी एक महान कदम।
साइबर सोमबार के हो
स्पेनिश मा अनुवादित, साइबर सोमबार "साइबर सोमबार" जस्तै हुनेछ। "साइबर" "साइबोर्ग" बाट आएको हो, जसलाई RAE ले "जीवित पदार्थ र इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूद्वारा बनाइएको" भनेर परिभाषित गर्दछ। यो अन्तिम भागको लागि हो कि यो सोमबार यो नाम प्राप्त गर्दछ, तर, अब हामी जान्दछौं कि साइबर सोमबार इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूसँग सम्बन्धित छ, यो के हो? ठिक छ, तिनीहरूले राखेको ब्रान्ड वा मार्केटिङ नाम बिक्री दिन वा विशेष घटना, तर जसको छुट, सैद्धान्तिक रूपमा, हामी तिनीहरूलाई विभिन्न पसलहरूको इलेक्ट्रोनिक्स खण्डहरूमा मात्र फेला पार्नेछौं।
यदि हामी सिद्धान्त हेर्छौं, को लागी इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुहरू, साइबर सोमबार अघिल्लो शुक्रबार भन्दा राम्रो छुट प्रस्ताव गर्नुपर्छ, त्यो, ब्ल्याक फ्राइडे, तर सबै सिद्धान्तमा। यद्यपि हामीले "साइबर लेखहरू" छुट मात्र पाउनुपर्दछ, त्यहाँ व्यवसायहरू पनि छन् जसले अवसरको फाइदा उठाएर अन्य उत्पादनहरूलाई छुट दिन्छ, जसले हामीलाई किन्न प्रोत्साहित गर्नेछ र उनीहरूले थप फाइदाहरू पाउनेछन्।
कहिले साइबर सोमबार २०२१ मनाइन्छ
साइबर सोमबार एक्लै आउँदैन। दिन आफैमा एक दिन मात्र हो, तर यो सोमबार हो जुन ब्ल्याक फ्राइडे पछि आउँछ, त्यसैले हामी दुई सामना गर्दैछौं (वा एउटा, तपाइँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने आधारमा) बिक्री घटनाहरू जसको उद्देश्य हामीलाई पहिलो क्रिसमस खरिदहरू गर्न प्रोत्साहित गर्ने हो। पहिलो ब्ल्याक फ्राइडेमा हुनुपर्छ, जुन नोभेम्बरको अन्तिम शुक्रबार हो र संयुक्त राज्यमा थैंक्सगिभिङको भोलिपल्ट, जुन अघिल्लो बिहीबार हो।
यसले हामीलाई छोड्छ कि साइबर सोमबार नोभेम्बरको अन्तिम सोमबार वा डिसेम्बरको पहिलो हो, जुन 2021 सँग मेल खान्छ। नोभेम्बरको लागि 29। तर यहाँ म केहि व्याख्या गर्न चाहन्छु: हो, साइबर सोमबार एक दिन हो, वा सिद्धान्त जान्छ कि यो हुनुपर्छ। तर व्यवसायहरूले हामीलाई उपभोग गर्न आमन्त्रित गर्न ब्ल्याक फ्राइडे र साइबर सोमबार प्रयोग गर्छन् र यो सम्भव छ कि घटना शुक्रबार सुरु हुन्छ, शनिबार र आइतबार जारी रहन्छ र सोमबार अन्तिम मिनेटमा समाप्त हुन्छ। यस तरिकाले, र त्यहाँ दुई अतिरिक्त दिनहरू भए पनि, प्रयोगकर्ताहरूले किन्नको लागि बढी समय पाउनेछन् र व्यवसायहरू लाभहरू प्राप्त गर्न। तर यो एक सम्भावना मात्र हो, सामान्य ढाँचा होइन।
किन साइबर सोमबार रेडिएटर वा स्टोभ किन्नको लागि राम्रो अवसर हो
चीजहरू यस प्रकारका छन्: बिक्री दिनहरूमा किन्नु राम्रो हुन्छ किनभने तिनीहरू सबैमा हामी कम तिर्नेछौं। तर साइबर सोमबार बिक्रीहरू (वा हुनुपर्छ) विशेष रूपमा इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरूका लागि हो, जसको मतलब यो पनि हो कि तिनीहरू ब्ल्याक फ्राइडे जस्ता अन्य दिनहरू भन्दा बढी छन्। कम से कम, त्यसैले सिद्धान्त भन्छ। त्यसैले साइबर सोमबार रेडिएटर वा स्टोभ किन्नको लागि यो राम्रो अवसर हो किनभने यी मध्ये धेरै उपकरणहरू इलेक्ट्रोनिक छन् र हामी तिनीहरूलाई बिक्रीको दिनमा किन्न जाँदैछौं जसको छुटहरू यी प्रकारका उत्पादनहरूमा केन्द्रित छन्।
माथिको व्याख्या संग, हामी कुरा गर्न सक्छौं सय छुटको लागि यति धेरै, तर तिनीहरू प्रस्ताव नगरेसम्म यी कसैको अनुमान हो। व्यापार र उत्पादनमा निर्भर गर्दै, हामीले केही हास्यास्पद बिक्री र अरू जसको मूल्यमा 70% छुट छ भेट्टाउन सक्छौं। हामीले यस्ता धेरै प्रस्तावहरू देख्ने छैनौं, तर त्यहाँ केसहरू छन्, र उत्पादनको लागि आधा भन्दा कम तिर्नु सधैं राम्रो सम्झौता हो।
यो पनि साइबर सोमबार उल्लेख गर्न महत्त्वपूर्ण देखिन्छ यो एक सामान्य बिक्री दिन होइन। त्यो भन्नु हो, सबैभन्दा लोकप्रिय बिक्रीहरू कपडाहरू हुन्, र तिनीहरूमा हामी प्रायः सबै चीजहरू फेला पार्छौं जुन तिनीहरूले सिजनमा बेच्न सकेनन्। यसको मतलब यो हो कि, यदि हामीले कोट किनेका छौं, हामीले अलि पुरानो शैलीको किन्न सक्छौं, वा हामीले गल्ती वा सन्तुलन समावेश गर्ने कपडाहरू पनि फेला पार्न सक्छौं, यद्यपि यो छुटमा प्रतिबिम्बित हुनेछ। यो साइबर सोमबारको समयमा हुने छैन: फरक हुने मात्र चीज मूल्य हो। ग्यारेन्टीहरू, बिक्री पछिको सेवा वा ढुवानीहरू पनि वर्षको बाँकी समयमा जस्तै हुनेछ। त्यसैले हो, साइबर सोमबारको समयमा इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरू खरिद गर्ने यो राम्रो अवसर हो।
किन यो साइबर सोमबार एक स्मार्ट थर्मोस्टेट किन्न लायक छ?
La बिजुली र ग्यासको बिल बढिरहेको छ। सबै कुरा खराब हुँदै गएको देखिन्छ र जाडोको समयमा तताउने प्रयोगको कारण मूल्यहरू गगनचुम्बी हुनेछन्। त्यसलाई ध्यानमा राखेर, तपाईंले स्मार्ट थर्मोस्ट्याट किन्न निर्णय नगरेसम्म धेरै विस्तृत तापक्रम नियन्त्रण कायम गर्न र तपाईंको अर्को बिलहरूमा धेरै पैसा बचत गर्न सक्षम हुने निर्णय नगरेसम्म गर्न सकिन्छ।
साथै, यदि यी उपकरणहरू महँगो वा पहुँच बाहिर लागेमा, साइबर सोमबारको समयमा तिनीहरू हुनेछन् हाँसोको मूल्यमा। तपाईंको खरिदमा बचत गर्ने र वार्षिक ऊर्जा बिलहरूमा सयौं यूरो बचत गर्ने अवसरलाई नबिर्सनुहोस्।
जाडोमा न्यानो अप गर्ने कुन उत्पादनहरू तपाईले साइबर सोमबार किन्न सक्नुहुन्छ
स्मार्ट थर्मोस्ट्याटहरू प्रत्येक जाडोमा धेरै बिक्री हुने यन्त्रहरू हुन्। यसको मुख्य र लगभग अद्वितीय प्रकार्य छ तापमान नियमित गर्नुहोस्तर यदि तिनीहरूले आफूलाई बुद्धिमान भन्छन् भने यो केहिको लागि हो। यो होइन कि तिनीहरूले हामीसँग कुराकानी गर्न सक्षम हुनेछन्, तर हामी उदाहरणका लागि, तिनीहरूलाई केही घण्टाको लागि मात्र सक्रिय गर्न वा अरूको लागि तापक्रम बढाउन वा घटाउने कार्यक्रम गर्न सक्छौं।
अर्कोतर्फ, हामीले कुरा गरिरहेका बुद्धिमत्ताले पनि हामीलाई अनुमति दिनेछ तिनीहरूलाई टाढाबाट नियन्त्रण गर्नुहोस्, जुन एक मोबाइल वा ट्याब्लेट वा कम्प्युटरबाट पनि एपसँग हुन सक्छ, जबसम्म ब्रान्डले यो सम्भावना प्रदान गर्दछ। तिनीहरूले प्रत्येक बितेको वर्षको साथ लोकप्रियता प्राप्त गर्दैछन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, यो सम्भव छ कि हामीले अर्को साइबर सोमबारमा स्मार्ट थर्मोस्टेटहरूको धेरै प्रस्तावहरू भेट्टाउनेछौं।
तपाईंहरू मध्ये जो दुई दशकअघि स्कूल गएका थिए, मलाई इमान्दारीपूर्वक थाहा छैन तिनीहरू अहिले कस्तो हुनेछन्, बिजुली रेडिएटरहरूले तपाईंलाई ती कुराहरू सम्झाउनेछन् जुन कक्षाकोठामा थिए, र सम्भवतः अझै पनि छन्। ती र केही घरहरूले बॉयलरको साथ काम गर्छन्, अर्थात्, तातो पानीको साथ, तर विद्युतीयहरू तिनीहरूले समान बिजुली काम गर्छन् जसले टिभी वा कम्प्युटर सुरु गर्छ। यद्यपि त्यहाँ विभिन्न आकार र डिजाइनहरू छन्, केहि सामान्यतया सानो हुन्छन्, र डिजाइन सामान्यतया सुन्दर हुँदैन।
तिनीहरू सबैभन्दा लोकप्रिय स्पेस तताउने उपकरणहरू होइनन्, र साइबर सोमबार जस्तो दिनमा यो राम्रो हुन सक्छ, किनकि यो कम लोकप्रिय ब्रान्डहरू र वस्तुहरू हुन्। हामी राम्रो मूल्य पाउन सक्छौं यस प्रकारका घटनाहरूको समयमा।
स्टोभ सबैभन्दा पुरानो तताउने उपकरणहरू मध्ये एक हो। माथि केवल ब्राजियरहरू छन्, अर्थात्, सानो कन्टेनरहरू जसमा एम्बरहरू राखिएको थियो, कम्तिमा, तलबाट टेबलहरू तातो। पछि, स्टोभहरू देखा पर्न थाले, ती तार वा चमक ट्यूब प्रयोग गर्नुहोस् जुन तिनीहरूको वरिपरिको तापक्रम बढाउन तताइन्छ।
अन्य प्रकारका स्टोभहरू पनि उपलब्ध छन्, जस्तै ग्याससँग काम गर्नेहरू, तर पछिल्लो साइबर सोमबारको समयमा फेला पार्न अझ गाह्रो हुनेछ। हामीले अझ धेरै देख्नेछौं कि ती हुन् जुन बिजुलीसँग सम्बन्धित छन्, दुर्लभहरू सहित जसमा बौद्धिक कम्पोनेन्ट पनि छ।
हीटरहरू थोरै फरक स्पेस हीटरहरू हुन्। त्यसो गर्न, तिनीहरू तार्किक रूपमा तातो हावा प्रवाहहरू प्रयोग गर्छन्। यस प्रकारको उपकरण सामान्यतया धेरै स्टोभ वा रेडिएटरहरू भन्दा कम मूल्य, तर तिनीहरू पनि केही कम सटीक छन्। तताउनको लागि हावा प्रयोग गर्दा, यदि हामीले सही कोण प्रयोग गर्दैनौं भने यो चिसो हुन सक्छ, तर तिनीहरू धेरै ठूला नभएको खण्डमा कोठाहरू तातो गर्न पूर्ण रूपमा सेवा गर्छन्।
जे भए पनि, हामी यन्त्रहरूसँग व्यवहार गर्दैछौं जसले तताउन सेवा गर्दछ र कम मूल्यमा त्यसो गर्छ, र यदि हामीले साइबर सोमबारको समयमा तिनीहरूलाई किन्यौं भने यो भन्दा कम हुनेछ।
साइबर सोमबार वाइफाइ थर्मोस्टेट छनोट गर्दा सुझावहरू
Para सही वाइफाइ थर्मोस्टेट खरिद गर्नुहोस् साइबर सोमबारको समयमा, र खरिदमा अफसोस नगर्नुहोस्, तपाइँ निम्न विचार गर्न सक्नुहुन्छ:
पहिले, तपाईले प्रयोग गर्न लाग्नु भएको थर्मोस्ट्याट उपयुक्त छ कि छैन भनेर जान्नको लागि तपाईसँग घरमा कस्तो प्रकारको बॉयलर र स्थापना छ भन्ने बारे सोच्नुहोस्। तिनीहरू सामान्यतया प्रणालीहरूको एक विस्तृत दायरासँग छन्।
एकचोटि तपाईंले थाहा पाउनु भएको छ कि कुन उपयुक्त छन्, कुन प्रकारको जडान सिफारिस गरिन्छ भनेर निर्धारण गर्न तपाईं थर्मोस्ट्याट कहाँ स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ हेर्नुहोस्।
अब तपाईलाई त्यो सबै थाहा छ, तपाईलाई सम्भावित मोडेलहरूको सूची छोडिएको छ जुन तपाईले दिमागमा राख्नु पर्छ।
साइबर सोमबारको समयमा, सबैभन्दा प्रसिद्ध अनलाइन बिक्री प्लेटफर्महरूमा मूल्यहरू तुलना गर्न सुरु गर्नुहोस् र प्रस्तावको लागि जानुहोस् जुन तपाईंलाई उपयुक्त हुन्छ ...
साइबर सोमबारको समयमा सस्तो वाइफाइ थर्मोस्टेट कहाँ किन्न सकिन्छ
यदि तपाइँ थाहा छैन भने तपाइँ कहाँ सक्नुहुन्छ सस्तो वाइफाइ थर्मोस्टेट किन्नुहोस् साइबर सोमबार, तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ:
अमेजन- प्लेटफर्ममा तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुने WiFi थर्मोस्टेटका सबै ब्रान्ड र मोडेलहरू छन्। थप रूपमा, यसमा स्मार्ट होमका लागि अन्य धेरै सामानहरू पनि छन् जुन तपाईंले आफ्नो खरिदलाई पूरक बनाउन यस दिनमा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले साइबर सोमबारको समयमा फ्ल्यास अफरहरू लन्च गर्नेछन् जुन तपाईंले प्राप्त गर्नको लागि हेर्नुपर्नेछ। र याद गर्नुहोस् कि यदि तपाईं प्राइम हुनुहुन्छ भने, ढुवानी निःशुल्क छ ...
चौबाटोको: Gala चेनको वेबसाइटमा तपाईंसँग सबैभन्दा लोकप्रिय WiFi थर्मोस्टेटका केही ब्रान्ड र मोडेलहरू पनि छन्। निश्चित रूपमा तपाईंले साइबर सोमबारको समयमा केही प्रस्तावहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
पीसी कम्पोनेन्टहरू: यो अन्य मर्सियान वितरकसँग पनि केही स्मार्ट थर्मोस्टेट मोडेलहरू छन् जसमा छूटहरू यस साइबर सोमबार लागू गरिएको छ। तपाईले छुट दिन चाहनु भएकोको लागि सोध्नुहोस् र यो एक प्लिसमा घर आइपुग्नेछ।
अंग्रेजी अदालत: स्पेनिश चेनले आफ्नो वेबसाइट मार्फत टेक्नोलोजी उपकरणहरूमा धेरै प्रस्तावहरू पनि राख्ने छ, जसमध्ये निश्चित रूपमा थर्मोस्टेटहरू हुनेछन्। अर्डर गर्नुहोस् र तिनीहरूले यसलाई तपाईंको घरमा पठाउनुहोस्।
मिडियामार्केट: अघिल्लोको अर्को विकल्प जर्मन मूलको टेक्नोलोजी स्टोरहरूको चेन हो। यदि तिनीहरू तिनीहरूको प्रतिस्पर्धी मूल्यहरूको लागि "म मूर्ख होइन" भन्ने नाराको लागि बाहिर उभिन्छन् भने, साइबर सोमबारको समयमा तिनीहरूले तिनीहरूको वेबसाइटमा मूल्यहरू भुइँमा फ्याँक्नेछन्। तपाईको थर्मोस्टेट किन्नको लागि मास्टर अवसर।
1 साइबर सोमबार बिक्रीमा Wi-Fi थर्मोस्टेटहरू
2 Wi-Fi थर्मोस्टेट ब्रान्डहरू जसले साइबर सोमबार आफ्नो मूल्य घटाउँछन्:
3 साइबर सोमबार के हो
4 साइबर सोमबार २०२१ कहिले मनाइन्छ?
5 किन साइबर सोमबार रेडिएटर वा स्टोभ किन्नको लागि राम्रो अवसर हो
6 किन यो साइबर सोमबार एक स्मार्ट थर्मोस्टेट किन्न लायक छ?
7 जाडोमा न्यानो अप गर्ने कुन उत्पादनहरू तपाईले साइबर सोमबार किन्न सक्नुहुन्छ
7.1 स्मार्ट थर्मोस्टेट्स
7.2 इलेक्ट्रिक रेडिएटरहरू
8 साइबर सोमबार वाइफाइ थर्मोस्टेट छनोट गर्दा सुझावहरू
9 साइबर सोमबारको समयमा सस्तो वाइफाइ थर्मोस्टेट कहाँ किन्न सकिन्छ